ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား ပြဿနာ ရှင်းတမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား ပြဿနာ ရှင်းတမ်း
- Myat Min
Posted by Myat Min on Nov 25, 2012 in Copy/Paste |5comments
လက်ပန်တောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းမှာသမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြောသွားတဲ့စကားကို ကြားကတည်းက ရင်ထဲမှာ တနုံ့နုံ့ဖြစ်နေတာ ….
ဒါနဲ့ Facebook မှာ ကိုချိုတူးဇော်ရေးထားတဲ့စာကို တွေ့ပီးဖတ်လိုက်ရတာကြိုက်လို့ .. ကျနော်တို့ရွာသားတွေလည်း သိရအောင် ပြန် Share ခြင်းဖြစ်ပါတယ် ….
“ကျေးဇူးခံ၊ ကျေးဇူးစား ပြဿနာ ရှင်းတမ်း”
လွတ်လပ်ရေး ဆုံးရှုံးခဲ့သည်တိုင် ထိုင်း ကိုတောင် ပို့ကုန်တဘက်သတ်နဲ့၊
ရွှေကျီးနိုင်လွန်၊ ဟံသာအေးနိုင်လွန်၊ ကြက်ဆင်ဖဲထီး၊ ပွင့်ကောင်း ငပိငံပြာရည်တို့ နိုင်ငံခြားပို့ကုန်တွေ ဖြစ်ခဲ့ရ။
ခေါင်းဆောင်တွေဆိုလည်း ဦးနု ဟာ အရှေ့တောင်အာရှမှာ သြဇာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်တဦးဖြစ်ခဲ့သလို(အင်ဒိုနီးရှားလွတ်လပ်ရေးအတွက် တောင် ထောက်ပံ့ခဲ့တယ်)၊ ဦးသန့်ဟာ နိုင်ငံတကာ က လေးစားလွန်းရတဲ့ ကမ္ဘာ့ ခေါင်းဆောင် တဦးဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလို တိုင်းပြည်ကို ချောက်ထဲကျဖို့ လက်တလုံး အလို လို့ အကြောင်းပြပြီး ကယ်တင်ရှင်လုပ် အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ဦးနေ၀င်းနဲ့ စစ်အုပ်စု တသိုက် ရဲ့
လက်ထဲမှာ တိုင်းပြည်ဟာ တဖြည်းဖြည်း ချွတ်ခြုံကျ ဆင်းရဲနိမ့်ပါးလိုက်တာ
၁၉၈၇ မှာ အဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြည်စာရင်း L.D.C ၀င်ခဲ့ရတယ်။
၈၈၈၈ မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ စည်းကမ်းမဲ့မှုတွေ၊ အသိဉာဏ်နိမ့်ပါးမရင့်ကျက်မှု
တွေကြောင့် တိုင်းပြည်အာဏာကို မလွှဲမရှောင်သာ ထိန်းသိမ်းခဲ့ရတာပါဆိုရင်
အလွန်ဆုံး စစ်တပ်အနေနဲ့ ကြားဖြတ်အစိုးရအသွင် အာဏာကို
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပပြီး ပြည်သူ့ဆန္ဒတခဲနက်သိရပြီးတဲ့အချိန်မှာ
သူရဲဘောကြောင်လှတဲ့ စစ်တပ်ဟာ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ပြီး တိုင်းပြည် ကို ပြည်သူ့ဆန္ဒ၊ ပြည်သူ့အစိုးရ လက်ထဲအာဏာလွှဲပြောင်းပေးဖို့ ငြင်းဆန်
ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးက ကန့်ကွက်နေတဲ့ကြားက အာဏာကို ဆက်ကိုင်စွဲထားလိုမှုတခုထဲနဲ့ တိုင်းပြည်ကို တရုတ် ဆီမှာ ဖြစ်ကတတ်ဆန်း
လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်ဆဲ နဲ့ အငြိ်မ်းစား စစ်အုပ်စုဗိုလ်ချုပ်တွေ တဦးချင်းစီ ရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကို ၈၈ မတိုင်မီ နဲ့ ၈၈ ပြီးမှ သေချာစိစစ်ပါ။ ဘယ်လောက်ကြီးမားတဲ့ အလွဲသုံးစားမှုတွေ ရှိနေတယ်
စစ်အုပ်စုဟာ ပြည်သူလူထုရဲ့ အကျင့်စာရိတ္တ၊ စိတ်ဓါတ်တွေကိုလည်း အကြီး
အကျယ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်။ လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုကို တရားဝင်နီးပါးခွင့်ပြုခဲ့တယ်။ ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စိတ်ဓါတ်တွေဟာ နဂို ထက် အများကြီးပျက်စီးခဲ့တယ်။ ပညာရှင်တွေ ပညာတတ်တွေကို ချိုးနှိမ်ခဲ့တယ်။
ဌာနတိုင်းမှာ နေရာဝင်ယူပြီး တလွဲ စီမံအုပ်ချုပ်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်။ အဆင့်တိုင်း စစ်ဗိုလ်ဟောင်းတွေဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွားရှာခဲ့တယ်။
နောက်ဆုံးရလာဒ် ဟာ ဒီနေ့မြင်နေရတဲ့ အဘက်ဘက် က ပျက်စီးယိုယွင်း
မကြာသေးမီ က လွှတ်တော်ထဲမှာ ဦးပိုင်ကိစ္စကို စစ်ဗိုလ်ချုပ်တယောက်က
ရှင်းလင်းတင်ပြသွားတာကို ဖတ်တဲ့အခါမှာ သူတို့တွေရဲ့ အဓိက ပြဿနာတရပ် ကို
ကျနော့်အနေနဲ့ ထင်းထင်းလင်းလင်း မြင်မိတယ်။
သိသိကြီးနဲ့ ဘူးခံကာကွယ်နေကြတဲ့သူတွေ ရှိသလို၊ တချို့တကယ်ကို ရိုက်သွင်းဖျက်ဆီးခံထားရလို့ အမှန်ကို မမြင်နိုင်တဲ့သူတွေ ရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဟိုတလောက ဦးသိန်းစိန် ရဲ့ ၀တ္ထုတို ဆိုတာကိုလည်းဖတ်ကြည့်ပါ။
၀န်ကြီး ဦးအောင်မင်း ပြောသွားတာလည်း အဲဒါတွေပဲ။ ဗကပ တွေ ရဲ့ ရန်တွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေကို ကာကွယ်ဖို့လိုတယ်။ ပြည်ထောင်စု ကြီး ဘာဖြစ်တယ်။ ညာဖြစ်တယ်။ သူတို့ မှာ နိုင်ငံရေး ဆိုတဲ့ အမြင်လေးနဲ့
ဖြေရှင်းဖို့ လုံးလုံး မရှိဘူး။
အရာရာ ကို သံသယစိတ်နဲ့ ပြည်သူကို ရန်သူလို ဆက်ဆံတယ်။
ဒါတွေဟာ နိုင်ငံရေး အမြင် မရှိလို့ ဖြစ်ရတဲ့ ပြဿနာတွေချည်းပါ။
နိုင်ငံရေး အမြင်ဆိုတာ ဘာလဲ လို့မေးရင် အယူအဆအမြင်ကွဲလွဲတာကို
ရန်သူလို့ မြင်တာကိုက နိုင်ငံရေး အမြင်မဲ့တာပဲပေါ့။
ဗကပ ကို နိုင်ငံရေး အမြင်မတူတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေလို့ မမြင်ဘူး။ ဒီတော့ ညှိနှိုင်းဖို့ မစဉ်းစားဘူး။ အပြိုင် လွတ်လပ်စွာ နိုင်ငံရေးလုပ်ကိုင်ခွင့် ပေးဖို့
သူတို့ကိုယ်တိုင်လည်း အသက်တွေ ၆၀ – ၇၀ တန်းသာ ရှိနေကြတယ်။ တသက်လုံး တခါမှ မြင်ဖူး၊ တွေးဖူးကြဟန် မရှိဘူး။
နောက်ဆုံးတော့ အနှစ်ချုပ်ရရင် ဒီတိုင်းပြည်ကြီး ဒီလောက်ထိ ဆိုးရွားနိမ့်ပါး
ကြွေးမြီတွေ တင်ခဲ့တဲ့ အဓိက တာဝန်ရှိသူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲ။
က ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလို့ ရိုးဖြောင့်၊ သတ္တိရှိမယ့် ခေါင်းဆောင်တွေ ထွက်လာမှသာ မြန်မာပြည် ဒီမိုကရေစီ လမ်းကြောင်းကို အမြန်ဆုံး ရောက်ဖို့
ရှိတော့တယ် လို့ မြင်မိပါတော့တယ်။
လောလောဆယ် ကျေးဇူးခံကျေးဇူးစား ပြဿနာကို ချေပပြောလိုတာကတော့
ဒီအကြွေးတွေဟာ မြန်မာပြည်သူတွေကြောင့် တင်ရတဲ့၊ မြန်မာပြည်သူတွေ ရဲ့ အကြွေးတွေ မဟုတ်၊ ခင်ဗျားတို့ ဖန်တီး ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ ခင်ဗျားတို့ရဲ့အကြွေးတွေပါ။
မူရင်းဖတ်ချင်သူများအတွက် … Facebook မှာ … https://www.facebook.com/chotuzaw/posts/426274690772078 သွားဖတ်နိုင်ပါတယ် ….
About Myat Min
Myat Min has written2post in this Website..
View all posts by Myat Min →
မြန်မာ့စီးပွားရေး ဦးပိုင်ကုမ္ပဏီ လိမိတက်နဲ့ တရုတ်နိုင်ငံက မြန်မာဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီတို့ ပူးပေါင်း လုပ်ဆောင်နေတဲ့ လက်ပန်းတောင်း တောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း ရပ်တန့်ရေးအတွက် သပိတ်စခန်း ဖွင့်ထားတဲ့ သံဃာတော်တွေနဲ့ ကျောင်းသားတွေ၊ ဒေသခံတွေ ရှိတဲ့နေရာကို နိုဝင်ဘာလ ၂၃ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းက သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်း လာရောက်ခဲ့ပါတယ်။ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဒေသခံတွေကို သူ ပြောသွားခဲ့တာကတော့ –
အဲဒီလိုမျိုး ပြောသွားတာလားဗျ …
တရုတ်က အစုတ်တွေ သွင်း၊ ပေးပြီး
ကောင်းပေ့ ဆိုတာတွေကို မ,မ သွားတဲ့အကြောင်း ..
ပြည်သူတွေတောင် ဖင်ခေါင်းထိ သိတယ် ..
ဒီလူက ဒါကိုတောင် မသိဘူးလား ???
ဒါ .. ပြည်သူ့တွေရဲ့ ရှေ့က လျှောက်နေတဲ့ သူတဲ့လား ????
အဲဒီလူ မျက်စိ မှုန်နေရင်လည်း အနားယူခိုင်းလိုက်တော့ဗျာ …
ထောင်မြင်ရာစွန့် အရိုးပစ်ကျွေးပြီး ခြံစောင့်ခွေးမွေးတဲ့နေရာမျိုးမှာ သုံးရတဲ့စကားမျိုးမဟုတ်ပါဘူး…
ကျေးဇူး ဆိုတဲ့စကားက စိတ်ကောင်းစေတနာကောင်းနဲ့ အကျိုးပြုတာကိုမှ သုံးရတဲ့စကားပါ…